Nhau - kuveura ndebvu kuburikidza nemazera
Kana iwe uchifunga kuti kurwira kwevarume kubvisa bvudzi kumeso ndekwechimanje manje, tine nhau kwauri. Pane humbowo hwekuchera matongo hwekuti, muLate Stone Age, varume vakaveurwa nedombo, obsidian, kana clamshell shards, kana kunyange vakashandisa maclamshells kunge tweezers. (Ouch.)
Gare gare, varume vakaedza nendarira, ndarira uye malezi esimbi. Vapfumi vanogona kunge vaive vagerwa munhu pabasa, nepo isu vamwe taizoshanyira shopu yekugera iyi. Uye, kutanga muMiddle Ages, iwe unogona zvakare kunge wakashanyira mugeri kana iwe uchida kuvhiyiwa, kuwedzerwa ropa, kana chero mazino akaburitswa. (Shiri mbiri, ibwe rimwe.)
Munguva pfupi yadarika, varume vakashandisa simbi yakatwasuka badza, inonziwo "cheka-huro" nekuti… zvakanaka, zviri pachena. Banga rayo-senge dhizaini raireva kuti raifanirwa kurodzwa nedombo rinonamira kana tambo yeganda, uye raida hunyanzvi hwakakura (tisingatauri nezve-laser-senge kutarisa) kushandisa.
NEI TAKATANGA KUVEURA NDEVHURE PAKUTANGA?
Nezvikonzero zvakawanda, zvinoitika. VaIjipita vekare vakagera ndebvu nemisoro yavo, pamwe nekuda kwekupisa uye pamwe senzira yekudzivirira inda. Kunyangwe zvaifungidzirwa kunge zvisina kuchena kukura bvudzi kumeso, maharahara (kunyangwe vamwe vakadzi) vaipfeka ndebvu dzenhema vachitevedzera mwari Osiris.
Kuveura ndebvu kwakazogamuchirwa nevaGiriki panguva yekutonga kwaAlexander Mukuru. Tsika iyi yaikurudzirwa zvakanyanya senzira yekudzivirira yemasoja, ichidzivirira muvengi kubva pakubata ndebvu mukurwa nemaoko.
FASHION STATEMENT KANA FAUX PAS?
Varume vanga vaine rudo-ruvengo hukama nevhudzi rechiso kubvira pakutanga kwenguva. Mumakore ese aya, ndebvu dzakaonekwa sedzisina kuchena, dzakanaka, chinodikanwa chechitendero, chiratidzo chesimba nehunyoro, chakasviba, kana chirevo chezvematongerwo enyika.
Kusvikira Alexander Mukuru, maGreek ekare akacheka ndebvu chete munguva dzekuchema. Kune rimwe divi, varume vechidiki vechiRoma munenge muna 300 BC vakaita bato "rekuveura ndebvu" kupemberera kukura kwavo, uye vaingokura ndebvu vachiri mukuchema.
Panguva dzakatenderedza nguva yaJulius Caesar, varume vechiRoma vakamutevedzera nekudzura ndebvu, uye Hadrian, Emperor weRoma kubva 117 kusvika 138, akadzosa ndebvu.
Vakuru gumi nemashanu vatungamiriri veUS vaive vasina ndebvu (kunyange John Quincy Adams naMartin Van Buren vakatamba dzimwe nyama dzinoyevedza dzemutoni.) Ipapo Abraham Lincoln, muridzi wendebvu dzakakurumbira nguva dzese, akasarudzwa. Akatanga tsika nyowani - mapurezidhendi mazhinji aimutevera aive nevhudzi kumeso, kusvika Woodrow Wilson muna 1913. Uye kubva ipapo, mapurezidhendi edu ese ave akachena ndebvu. Uye nei? Ndebvu dzakabva kure.